रोशनी केसीको ‘जानी नजानी’ चलचित्रको गीत सार्वजनिक
२०७५ माघ १० बिहीबार / 24th January, 2019
काठमाडौँः रोशनी केसी प्रस्तुतकर्ता रहेको चलचित्र ‘जानी नजानी’ को 'एउटीलाई मुटुमा घर' बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको छ ।
बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी रोशनी केसी निर्मित फिल्मको गीत सार्वजनिक गरिएको हो । सडक बालबालिकाको वास्तबिक जीवनमा आधारित चलचित्र 'डा. खाते' निर्माण गरेर निकै चर्चा बटुलेकी अभिनेतृ केसीको चलचित्र ‘जानी नजानी’ १ चैतमा प्रदर्शन हुँदै छ ।
यस भन्दा अगाडि निर्माण गरिएको चलचित्र 'डा. खाते' भन्दा फरक कथावस्तु चलचित्र ‘जानी नजानी’ मा समेटिएको प्रस्तुकर्ता केसी बताउँछिन् । उक्त ‘जानी नजानी’ चलचित्रमा प्रस्तुतकर्ता रोशनी केसीको पनि दमदार अभिनय रहेको छ । चलचित्र लाई दर्शकहरुले मन पराई दिनेमा प्रस्तुतकर्ता रोशनी निकै आशावादी छिन् ।
त्यसैगरी लामो समयदेखि असिस्टेन्स डिरेक्टर भएर काम गरेका बसन्त अधिकारीले निर्देशनमा डेव्यु गरेका छन् । कार्यक्रममा निर्देशक बसन्त अधिकारीको कामगर्ने शैलीको उपस्थित सबैले तारिफ गरेका थिए ।
यसका साथै चलचित्र क्षेत्रमा बसन्त अधिकारी निकै नै मिलनसार र सजिलो व्यक्तिको रुपमा चिनिन्छन् ।
चलचित्रमा मनिष र सुमिकोसाथै निरिशमा बस्नेत, नम्रता श्रेष्ठ लगायतको अभिनय देख्न सकिन्छ भने चलचित्रलाइ सामिप्यराज तिमिल्सीनाले लेखेका हुन् । रोशनी इन्टरटेन्मेनटको ब्यानरमा निर्मिण गरिएको चलचित्रमा मोदनाथ खनाल र सागर काजी मालीको निर्माण रहेको छ ।
नेपाल विद्यार्थी संघले बुधबार सरकारविरुद्ध प्रदर्शन, सरकारलाई १६ प्रश्न ?
उपत्यका र आसपासका क्षेत्रलगायत देशका विभिन्न भागमा हिउँ वर्षा
विश्व आर्थिक मञ्चमा प्रधानमन्त्री ओली : ‘चीन र भारतसँग मजबुत सम्बन्ध बनाउँदैछौँ’
गोंगबुमा हतियार धारीसँग प्रहरीको जम्काभेट, प्रहरीको गोली लागि एक घाइते
संसदमा हंगामा, शिक्षा मन्त्री काग्रेस सांसदको घेरा बन्दीमा
निर्माण व्यवसायीहरुको आरोप : उपभोक्ता समिति मार्फत साना व्यवसायीलाई विस्थापित गर्न खोजियो
अपराध न्यूनिकरण र अनुसन्धानमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न एआईजी राईको निर्देशन
मालढुंगामा बस दुर्घटना हुँदा ७ जनाको मृत्यु, ३१ घाइते
टोखामा जुवा अड्डा, पाँच लाख नगदसहित १५ जुवाडे पक्राउ
कुटपिटमा संलग्न विरुद्ध सार्वजनिक मुद्धा दर्ता